Mar labaad ayaa la xaqiijiyay: Galaxy Note 10 wuxuu taageero u heli doonaa 5G | Androidsis
Rafaa Kuuriya wuxuu bilaabay mid cusub Taxanaha Galaxy S10 bishii hore magaalada New York. Markii dambe, aaladaha waxaa si rasmi ah looga diyaariyay Shiinaha, Hong Kong, Hindiya, Mareykanka, Yurub, iyo suuqyo kale. Dhammaan moodooyinka sameeya ayaa la yimaada Qualcomm Snapdragon 855 Mareykanka iyo kan GOS Exynos 9820 leedahay guriga wadamada kale.
Falanqeyn ka dib, horumariyeyaasha XDA-Horumarinta waxay u maleeyeen in lambarka isha kernel ee Galaxy S10 wuxuu ka kooban yahay xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan Galaxy Note 10, terminal-ka xiga ee xiddigga South Korea ee imaan doona bartamaha sanadka. Tani waxay noqotay sidaas. Waxay ogaadeen in taleefanka soo socda ee waxqabadka sare uu taageeri doono shabakadda 5G.
Magaca nambarka ee Samsung Galaxy Note 10 waxaa laga helay koodhka isha Waxay ka kooban tahay macluumaad ku saabsan isku xirnaanta shabakadda 5G. Si sax ah, magaca koodhka uu shaaca ka qaaday qof caan ah oo caan ah, kaas oo ahaa Ice Universe, ayaa lagu sheegay waqti dheer ka hor faylka qaabeynta ee Galaxy S10 oo leh Exynos 9820. (La xiriira: Xaqiijiyay: waxaa jiri doona nooca 5G ee Samsung Galaxy Note 10)
Galaxy S10 kernel koodhka isha
Tixraaca waxaa lagu arki karaa khadadka koodhka kor lagu faahfaahiyay, sawirka, halka "BEYONDO" loola jeedo Samsung Galaxy S10e, "BEYOND1" waa Galaxy S10 (faallooyin malahan), "BEYOND2" waa Galaxy S10 + iyo " BEYONDX »Wuxuu badalayaa Galaxy S10 5G. Tan ugu dambeysa, laakiin uguyaraan, waa tan "DAVINCI5G", ayaa la filayay laguna xantaa inuu noqdo 10G Samsung Galaxy Note 5, maadaama ay noqon karto magaca summadaha ee phablet.
Sida laga soo xigtay fikradaha qaarkood, Samsung waxay ku dhawaaqeysaa processor-ka cusub Exynos 9825 gaar ahaan Galaxy Note 10. Ma jiro macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan processor-ka, laakiin suurtagalnimada bilaabista ayaa aad u sarreysa marka la barbardhigo diiwaanka sanadihii hore ee Samsung. Waxaan rajeyneynaa inay keeneyso xoogaa horumar ah Exynos 9820, oo ay kujiraan xawaare saacado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mar labaad: Samsung Galaxy Note 10 waxay la imaan doontaa isku xirnaanta 5G, sida la filayo
Sida loo demiyo si toos ah fiidiyowyada loogu duubo Telegram